एनआरएन विशेष Archives - Durbin Nepal News
दूरबिन संबाददाता । अमेरिका ।शुक्रबार साँझ वेभनरबाट एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा शुरु भएको छ । उद्घाटन समारोहमा गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद आइसीसीका पदाधिकारीहरूले एनआरएनए अमेरिकाका कतिपय पक्षमा चासो र चिन्ता समेत जाहेर गरेका छन् । एनआरएनए अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्का....
दुरबिन संवाददाता । अमेरिका । एनआरएनए अमेरिकाको जुलाई ४ र ५ तारिख हुन गइरहेको साधारण सभामा विभिन्न विषयका ८० जना विज्ञहरूले आफ्ना प्रस्तुति दिनुका साथै छलफलमा सहभागि हुने भएका छन् । आठवटा गोष्ठि र चार वटा टाउनहलमा विज्ञहरूको प्रस्तुति हुने छ । अनलाईनबाट हुने यो साधारण सभामा ६ सय भन्दा बढिको सहभागिता....
दूरबिन संवाददाता । अमेरिका । एनआरएनए अमेरिका भोली अर्थात शनिबारबाट हुने आफ्नो अधिवेशनको चटारोमा छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको साझा संस्था एनआरएनएको इतिहास मै पहिलो पटक सूचना प्रविधिमा आधारित वार्षिक साधारण सभा एनआरएनए अमेरिकाले आयोजना गर्दै छ । यसलाई ज्ञान सम्मेलनको नाम दिएर सुनमा सुगन्ध....
अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्ताराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत चार क्षेत्रिय संयोजकहरूले विदेशमा अलपत्रमा परेको नेपालीहरूको उद्धारका नाममा मनपरि भाडा लिईनुलाई दुखद भनेका छ । क्षेत्रिय संयोजकहरूले बिहिवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै, ‘मध्य पूर्व,यूरोप ,अफ्रिका र बिश्वका अन्य विभिन्न....
दूरबिन संवाददाता ,अमेरिका । अबको २२ दिन अर्थात जुलाई ४ र ५ तारिखमा गर्ने भनिएको एनआरएनए अमेरिकाको साधारण सभा कुनै पनि हिसाबले नरोकिने महासचिव पशुपति पाण्डेले दावी गरेका छन् । महासचिव पाण्डेले साधारण सभा रोक्न वा सार्नलाई संस्था भित्र प्रयास गरिरहेको आरोप र भनाइको प्रतिवाद गर्दै दूरबिन नेपालसँग भने....
दूरबिन नेपाल, न्युयोर्क । नेपालको कालापानी लिम्पीयाधुरा तथा लिपुलेक भारतद्वारा मिचिएको विषयमा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल र....
अमेरिका । गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अमेरिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि शिक्षा र क्षमता विकासमा कार्यक्रम शुरु गरेकाे छ । एनआरएनए अमेरिकाले आफ्ना सल्लाहाकार स‌ंजय थापाको संयोजकत्वमा एजुकेसन एण्ड स्कील ईनह्याण्ड्मेन्ट कमिटि गठन गरि कार्यक्रम शुरु गरेको हो । संयोजक....
दूरबिन नेपाल अमेरिका । एनआरएनए अमेरिकाले आईसीसीलाई महामारीको सहयोग लागि १० हजार डलर पठाएको २४ घण्टा नबित्तै एनआरएनए अमेरिका क्षेत्रलाई नै सहयोग चाहिएको भन्दै क्षेत्रीय संयोजक राजन त्रिपाठीले आईसीसीलाई पत्र पठाएका छन् । मे २८ तारिख बिहीबार अर्थात आज साँझ अध्यक्ष कुमार पन्तलाई सम्बोधन गर्दै....
दूरबिन संवाददाता अमेरिका । कोरोना भाइरसका कारण सबै भन्दा बढि नेपाली प्रभावित भएको देश अमेरिकालाई एनआरएनए आईसीसीले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै सहयोग मागेको छ । घाटा बजेटमा धानिएको एनआरएनए अमेरिकाले आईसीसीको मागलाई संवोधन गर्दै १० हजार डलर पठाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ । एनआरएनए अमेरिकाका....
अमेरिकामा रहेका नेपाली विद्यार्थी नेटवर्क प्रभावकारी बनाउन एप्स निर्माण
अमेरिकामा । अमेरिकामा रहेका विद्यार्थीहरुको नेटवर्कलाई प्रभावकारी बनाउन एप्सको निर्माण गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अमेरिकाद्वारा गठित विद्यार्थी ट्राक्स फोर्सले यस्तो एप्स बनाएको हो । विद्यार्थी ट्राक्स फोर्सका संयोजक त्रिभुवन पाण्डेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 'प्रबिधिको उच्चतम....
अमेरिका । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए सत्तारुढ पार्टीको भातृ संगठन जस्तो भएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका पूर्व संयोजक बिष्णु सुवेदीको आयोजनामा भएको 'जुम' बैठकमा यस्तो आरोप लगाइएको हो । एनआरएनए आइसीसी केन्द्रीय सदस्य प्रमोद सिटौला सह-आयोजक रहेको बैठकमा....
न्युयोर्क । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएए अमेरिका अन्तर्गत न्युयोर्क च्याप्टरले कोरोना संक्रमण विरामीको संख्या कम देखिदै गएको भए पनि सर्तक भने रहन आह्वान गरेको छ । न्युयोर्क च्याप्टरका सभापति रामहरि अधिकारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै, 'अहिले कोरोनाको संक्रमण कम भएको र बिरामीको संख्या कम देखिए पनि....
एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रका मानार्थ परिषद सदस्य बैठक : भारतको मिचाहाँ प्रवृति विरुद्द विश्वभरबाट विरोधमा उत्रन आश्वान
अमेरिका । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए अन्तर्गत अमेरिका क्षेत्रका अभियान्ताहरुले भारतले नेपालको सिमा मिचेको विषयमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका भारतीय दुतावास मार्फत विरोध गर्न सुझाव दिएका छन् । एनआरएनए अमेरिकाज क्षेत्रका मानार्थ परिषद सदस्यहरुको स्वागत तथा परिचयात्मक भिडियो बैठकमा सहभागिले....
कोरोना संक्रमणमा एनआरएनए आइसीसीले चन्दा संकलन र राहात वितरण कसरी गरेको छ ?
विश्वनै महामारीले आक्रान्त बनेको बेला एनसीसीको गुनासा किन सुनुवाइ भएको छैन् ? यि लगायत प्रश्नको जवाफ एनआरएनए आइसीसीका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ सँग खोज्दै छौं....
भारतले लिपुलेक मिचेकोमा एनआरएनएले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध गर्ने, भारतीय दुतावास देखि संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउने
अमेरिका । नेपालको लिपुलेकमा भारतले सिमा मिचेर मोटरबाटो बनाएकोमा गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले विश्वभरबाटै विरोधात्मक कार्यक्रम चलाउने भएको छ । एनआरएनए आइसीसीका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले दूरबिन नेपाललाई दिएको जानकारी अनुसार एनआरएनले आफ्ना राष्ट्रिय समन्वय समिति मार्फत हरेक देशमा रहेका भारतीय....